ရောမအင်ပါယာ. ရောမအင်ပါယာ စဖြစ်လာတာက… | by Cing Sian Dal | Jan, 2021 | Medium
ရောမအင်ပါယာ စဖြစ်လာတာက ဘုရင်စနစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်သူတွေက စတင် ပုံကန်တာဖြစ်ပါတယ်။ Brutus နဲ့ Collatinus ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်ထန်သူတွေကနေ စတင်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဘုရင်ကတော့ Tarquin ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နဲ့ သူ့မိသားစု တစ်ခုလုံးကို B.C. 510 မှာ မောင်းထုတ်လိုက်ကြပါတယ်။ လူထုတွေက Brutus နဲ့ Collatinus ကို ရောမကို အုပ်ချူပ်ဖို့ တင်မြောက်လိုက်တယ်။
ပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ​ရောမအင်ပါယာကြီးဆိုတာ Rome ဆိုတဲ့ မြို့သေးသေးလေးကနေ ဖြစ်လာတာ ဖြစ်တယ်။
နှင်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဘုရင် Tarquin ကလည်း အငြိမ်မနေဘူး၊ သူနှင်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ နယ်မြေက Etrusancan နဲ့ Latin တွေနဲ့ ပူပေါင်းပြီး ရောမ ကို ပြန်လည် တိုက်ခိုက် ကြတယ်။ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီတော့ အဲဘုရင်က အမျိုးမျိုးကြံရတာပေါ့။ ရောမကို သစ္စာဖောက်ဖို့ ရောမအတွင်းကလူတွေကို အမျိုးမျိုးကြံစီကြတာပေါ့။ အဲထဲမှာ ရောမရဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ပြင်းထန်တဲ့ Brutus ရဲ့သား (၂)ဦးက ဘုရင် Tarquin ဘက်မှာ ပါလာတယ်၊​အဲတော့ Brutus က သိတော့ သူတို့ (၂)ဦးကို နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်မှုနဲ့ သေဒဏ်ပေးလိုက်တယ်။
အစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းပုံက ဒီမိုကရေစီဆန်တယ်။ Republic ပုံစံဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ သမ္မတနိုင်ငံတော်ပေါ့။ သူတို့မှာ လူ(၂)ဦးအုပ်ချူပ်ရတယ်။​တစ်နှစ်တစ်ခါပြည်သူတွေက ပြန်လည် တင်မြောက်ရတယ်။
ဘုရင်ကို တော်လှန်တဲ့နေရာမှာ အောင်မြင်တဲ့အကြောင်းရင်းက သူတို့မှာ လူတန်းစာ (၂)လွှာရှိတယ်။ တစ်လွှာက မြို့တွင်းမှာ နေရတယ်။ သူဌေးအလွှာပေါ့။ နောက်တစ်လွှာက မြို့ပြင်မှာ နေရတယ်။ ဆင်းရဲသား အလွှာပေါ့။​စစ်ဖြစ်ရင် စစ်တိုက်မယ်ဆိုရင် မြို့ပြင်က ဆင်းရဲသားအိမ်တွေ ယာတွေ ပျက်စီးလေ့ရှိတယ်။ အဲလိုနဲ့ ဆင်းရဲသားအလွှာက သူဌေးတွေဆီ အကြွေးတွေ တင်လာတယ်။ တစ်ဖြည်ဖြည်းနဲ့ ဒီအလွှာ (၂)ခု ဂယက်တွေ ထလာတယ်။ အဲဒီတော့ ဆင်းရဲသား အလွှာက လူတွေက သူတို့ ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေကို တစ်ခြားနေရာမှာ သွားနေလိုက်တယ်။ သူဌေးအလွှာက လူတွေကလည်း ရောမကို ဆက်လက်တည်တံဖို့ သူတို့ကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာ သူတို့ပဲ တိုက်ကြရလို့လေ။ အဲဒီတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပြန်လည် အဆင်ပြေအောင် ဥပဒေထုတ်တယ်၊ အစိုးရရေးရာ အုပ်ချူပ်မှုရေးရာမှာလည်း သူတို့က ပါဝင်စေခိုင်းတယ်။ တစ်ဖြည်ဖြည်းနဲ့ တန်းတူ အခွင့်အရေးတွေ ရလာတာပေါ့။
ရောမတွေက တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ နယ်မြေအသစ်ကို သူတို့ သိမ်းပိုက်တယ်။ သိမ်းပိုက်ပြီးတော့ သူတို့ကို ကျွန်းပြုတာထက်စာရင် သူတို့နယ်မြေကို ဒီအတိုင်း လှည့်ပတ်စေခိုင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခွန်ငွေကို ရောမကို ဆက်သခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့မှာ ကောင်းတာက တစ်ခြားသော နယ်မြေတွေကို သိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာ သူတို့က သူတို့မှာ ရှိတဲ့ အနုပညာ, ဗိသုကာ, စာပေတွေကို တစ်ခါတည်း လေ့လာတယ်။ အခွင့်အရေးမျိုစုံးပေးလေ့ရှိတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ရောမဥပေဒေကို ပြန်ပြင်ပေးတယ်။ ရောမက တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သိမ်းပိုက်လာတော့ သူတို့ သဘောကျနဲ့ နယ်မြေက ဂရိပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ စာပေ၊ ပညာ၊ အနုပညာ၊ ဗိသုကာပညာ ပညာမျိုးစုံးတွေရှိတာရယ်။​အနုပညာ ဗိသုကဆိုတာ သူဌေးတွေ ဇိမ်ခံကောင်းဖို့ အရာဖြစ်လာတယ်။​ စစချင်းမှာ တော့ ရောမတွေက စာမတတ်ကြပါဘူး။ ဂရိကိုလည်းရောက်တော့ သူတို့ကို ကျွန်ပြုစေပြီး သူတို့ သား သမီး သူတို့ကို စာရေးတတ် ဖတ်တတ်အောင် သင်ကြားပေးရတယ်။ တစ်ခြားသော ပညာတွေကိုလည်း သင်စေတယ်။ သူတို့ ယဥ်ကျေးမှုတွေ ဓလေ့ထုံတမ်းတွေကိုလည်း သင်ကြားစေတယ်။ ရောမတွေက သဘောကျတဲ့ ဂရိ ယဥ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံတမ်းတွေကို ကျင့်သုံးလာကြတယ်။
ရောမအင်ပါယာက ပြောရရင် အံသြဖို့ကောင်းတယ်။ သူတို့း အင်ပါယာ သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ထိ အုပ်ချူပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ စနစ်က အရမ်းကောင်းပြီး သိမ်းပိုက်တဲ့ နယ်မြေတွေရဲ့ ကောင်းတဲ့ အရာ ၊ပညာတွေ၊​ဓလေ့တွေကို လက်ခံကျင့်သုံးတာကြောင့်ရယ်၊​ ဒေသခံရဲ့ လိုလားချက်ကို အလေးပေးတာရယ်ကြောင့် အင်ပါယာက တော်တော်တည်တံခိုင်မြဲခဲပါတယ်။
စာကြွင်း ( စဥ်စားရန် )
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ခရီးစဥ်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေး၊​ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချူပ်ခွင့် ဘာကြောင့် မပေးနိုင်သေးတာလဲ?